Gcina amadivayisi akho abalulekile uphinde ugijime ezimweni eziphuthumayo
Ukuphuma kwamandla okungazelelwe noma ukukhuphuka kungadala idatha yakho futhi kubangele ukulahlekelwa okubizayo kwamafayela noma i-hardware. Ukuphazamiseka kwamandla kagesi (UPS) ukuze unikeze impilo ebhethri eyengeziwe, kubalulekile kuzo zonke izimo eziphuthumayo kanye nokusebenza kwansuku zonke. Ezinye ze-UPS zenziwe kangcono ukuze zisebenzise ikhaya noma ihhovisi, kanti ezinye zingasebenza njengezikhungo zokusebenza eziphathekayo ezisetshenziselwa ngaphandle kakhulu. Noma ngabe yi-UPS oyithengayo, qiniseka ukuthi i-electronics yakho iyahambelana nokunikezwa kwamandla.
Vikela ku-865W amadivaysi kagesi nge-UPS enamandla kusuka ku-APC. Le divayisi izogcina inethiwekhi yakho isikhathi eside, ugcine ikhompyutha yakho nenethiwekhi engenazintambo ihamba ngesiphepho.
Faka amadivayisi angafika ku-10, kufaka phakathi amahlanu ane-backup ibhethri, kanye nokuvikelwa kokukhuphuka. Ungakwazi ngisho nokukhulisa amandla ngokuthenga ibhethri ehlukile yebhethri yokwengeza impilo yakho yamadivayisi wakho. I-port e-ethernet igcina i-intanethi yakho isebenza ngenkathi i-othomathikhi yokulawula i-voltage iqinisekisa ukuthi wonke amadivaysi akho akhokhiswa ngokusebenza kahle. Ezinye izinto zihlanganisa intambo yamandla ezinyawo eziyisithupha ukuze kube nokuguquguquka ekubekeni, isibonisi se-LCD nokulinganiswa kwe-Energy Star.
I-CyberPower yenza umugqa wempahla yamandla engaqinisekisiwe kakhulu ephuma kusukela ku-685VA / 390W kuya ku-1500VA. Ngisho nemigodi ephansi kakhulu yanele ukuqinisa indlu ihora ngehora. Imodeli iza nezitolo eziyisishiyagalombili, ukuqhuma kwebhethri + ezine nebhethri elilodwa kuphela, lihlukaniswe phakathi kwezinhlangothi ezimbili zecala elimnyama elixubile. Okubaluleke kakhulu ngesikhathi se-blackout, inikeza amachweba ukuxhuma ikhebula noma i-modem ye-DSL nomzila uma kwenzeka isimo esiphuthumayo. Imithethonqubo yamandla kagesi ivimbela ama-brownouts kanye nomkhiqizo we-sinewave owenziwe usebenzise amandla wokumisa amagesi wokugcina amandla wokugcina amandla webhethri amandla. Ubukhulu bedivaysi buhle futhi buhle kakhulu kumakhaya namahhovisi, lapho kuzovikela amakhompyutha wakho kanye nemishini yemidiya.
Le UPS elula futhi enokwethenjelwa izovikela kuze kufike amadivaysi ayisikhombisa avela futhi izogcina imishini yakho iphinde isebenze esimweni esiphuthumayo. Izitolo ezinhlanu zihlinzeka ngecala, kuyilapho i-USB ezinikezele ibuye iseze ukushaja amadivayisi smart. Iyunithi iza ne-software ye-PowerChute Personal Edition ukuze isebenze njenge-CMS nokuqapha kwamandla, ikusiza ukuvimbela inkohlakalo yedatha. Lindela isikhathi esingamahora amane sokugijima kanye nemithetho ephansi yamandla, ngenxa yesitifiketi se-Energy Star.
Indiegogo kanye nabaxhasi be-Kickstarter bavumelane ne-start-up ChargeTech ukuthi othile kufanele enze ibhethri ephathekayo engcono. Umphumela wawuyi-PLUG, okungaphezu kokuhlangabezana nokulindelwe kwabathengi bayo ukuthi babe yi-UPS ephathekayo emakethe. Ibhethri ephathekayo ibeka ama-54,000 mAh amahle, okuwanele ukunikeza iqembu langaphandle elihlala ubusuku bonke. Uma lokho kushayiswa okwanele, ukukwazi ukushisa kabusha kwelanga kuyatholakala.
I-PLUG idlulile amandla ngenkathi ivuselela, okusho ukuthi ungayisebenzisa ukuze ulayishe amanye amadivaysi ngenkathi ikhokhiswa. Iza nezindawo ezimbili zokudonsa udonga, amabhulogi amabili e-USB okusheshayo kanye ne-USB type C port. Uma nje udinga ukushaja amadivaysi eselula, ungasebenzisa inkinobho yokugcina amandla, okuyinto ehlukanisa amandla kumachwebeni amabili e-USB ukuze kube nokuphila okude. Izitolo ezimbili zomhlaba zihambisana nezinhlobo ezivamile ze-plug, kuyilapho ubukhulu bayo be-compact kwenza kube lula ukuletha nawe.
Le-UPS ngu-Chafon ibeka ugcizelele ezintweni zokusebenza kanye nokuklama, okuholela ekunikezeni amandla okumandla okuncane, okulula, okunamandla okusebenza okuphezulu okusebenza ngaphakathi nangaphandle. Ngeziphumo ezingu-11, kuhlanganise nezindawo ezintathu ze-AC ku-120V, ezinezingodo ezine ze-DC 12V namasebe amane we-USB, le divayisi izosebenza kahle njengesikhungo samandla esiphuthumayo esisekhaya esikhungweni esiphuthumayo esingakwazi ukusigcina futhi sigcine ama-PC namadivayisi aphezulu asebenzayo uma usebenza badinga kakhulu.
Kodwa idizayini yayo ehlukile ibuye ikhokhelwe kahle ezintweni ezingaphandle, ngenxa yesibambo esilungile kanye nesimiso esinezinhlangothi ezimbili ezikuvumela ukuthi ujoyine izidingo ezihlukahlukene ngaphandle kokukhathazeka mayelana nokuwela izintambo noma ama-plugs aphikisanayo. Izici ezingeziwe zihlanganisa ukushaja kwelanga, i-fan, igridi yokubasa ukushisa, isilathisi se-LED sokushaja kanye nokubonakala komlilo.
Le-UPS smart-mountable e-APC iyindlela ehamba phambili yamabhizinisi adinga ukunikezwa kwamandla we-network ukugcina idatha yabo uma kwenzeka ukuphuma kwamandla okungazelelwe. I-sinewave ehlanzekile ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme kakhulu lokuhambisana ne-elekthronikhi esebenzayo. Idivayisi izohlinzeka ngamaminithi angu-20 okugijima, okwanele ukuvala amasosha ngokuphepha ngaphandle kokulahlekelwa kolwazi. Iyunithi eqinile futhi ejulile enezindawo eziyisishiyagalombili zokuhambisa amandla futhi iyahambisana namabhethri okusekelayo uma ufuna ukukhulisa amandla isikhathi eside.
Le-UPS yenzelwe ukuhamba, ifake kahle kahle esikhwameni noma esikhwameni bese uhlala ezinhlobonhlobo zamapulagi. Unomthamo ophezulu we-42000mAH ozogcina izinto zakho zikhokhiswe ngokuhamba kwezimoto ezihamba phambili, kanye nemiphumela eyisithupha, kuhlanganise nezindawo ezimbili zokungenisa ama-AC kanye nezindawo ezine zokushaja ze-USB. Izitolo ezimbili zisebenza nama-laptops nge-DC yamanje kuze kufike ku-10A / 120W. Isekela ukushaja okusheshayo futhi yakhiwa ngamaseli ebhethri e-lithium-ion ephezulu.
I-Apple Magic Mouse - Ukubuyekezwa Komkhiqizo nokuthi Ungayisebenzisa kanjani
I-8 Best Rolling Laptop Bags Ukuthenga ngo-2018
I-4 Best AGP Graphics Cards Yokuthenga ngo-2018
I-Drivers Hard 9 Ezingcono kakhulu ze-SATA ezithenga ngo-2018
Umhlahlandlela Wokuvuselelwa Kwekhompyutha
Izipho ze-PC zomculi we-Apple Computer
I-Modem ye-8 Best Cable Yokuthenga ngo-2018
Ukubukeza komzila we-Magic Trackpad - Mane nje i-Trackpad ehamba phambili ye-Mac yakho
Ukunciphisa Ingxolo Yomshoshaphansi kanye Ne-Ambiance
Indlela Yokuhlela Ucingo Lenkomfa nge-Skype
I-Headphone Ezingcono Ezingu-8 Zokuthenga Ngezingane ngo-2018
Gcina i-PC yakho ikhululekile nge-Malware nge-Scanning Week Scan
I-Top 8 Super Mario Bros Imidlalo ye-PC
Indlela Yokubuyisela i-iPad ku-Factory Okuzenzakalelayo Ukusebenzisa i-iTunes
I-Hulu Plus Ukusakaza Iqoqo leCriterion
Yikuphi Okungcono: I-Flash noma i-Animated GIF?
Indlela Yokushintsha Ukulandelana Kwezingoma kuhlu lwadlalwayo lwe-iTunes
Ikhasi lasekhaya le-YouTube
I-Wired nobe Wireless Mouse?
Iyini ifayela le-PEM?
I-Do and Don'tts yokusebenzisa i-Social Media ye-App Marketing
13 Amawebhusayithi Wevidiyo Okudingeka Ukwazi Ngawo
Indlela yokususa izingxoxo ze-Snapchat, i-Snaps nezindaba
Imidlalo ephezulu ye-PSP yezingane
Indlela Yokuthuthukisa I-PS3 Hard Drive yakho cishe ngamaminithi angu-10
Ukusakaza i-VUDU Ku-4K - Okudingeka Ukwazi
Indlela yokulungisa isignali ye-Wi-Fi engalungile ku-iPad yakho
Indlela Yokuxhuma I-Alexa kuSomlomo we-Bluetooth